We She Me: ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားလောင်း အပို ရှိသည်
| FLAGS: Art , Australia , Baby
Michael Sync - 1/12/08, 4:37 PM
wow!! this is kinda "wow" post.. thanks.. I just come to know about your blog.. and enjoy reading your blog this morning.. :)
Andy Myint - 1/13/08, 12:12 AM
Thanks, Michael. You too have an awesome tech blog.
Kay - 1/14/08, 5:04 PM
ဒီ ပို့စ်လေးကိုလည်း..ဖတ်ပြီး..သဘောကျနေတာ..အရင် ရက်ထဲက..
စိတ်ဝင်စားစရာ အချက် လေး တွေကို..အချိန်ပေး ဘာသာ ပြန် ထား လို့လေ...
Andy Myint - 1/14/08, 10:02 PM
ကျေးဇူး အစ်မ။ ဘာသာ ပြန်မှလည်း (ကိုယ့်ဘာသာ) အသေအချာ ဖတ်မိမှာမို့ ပြန်လိုက်တာပါ။